कमरेड ओम कोईराला ! यो रोगलाई पक्कै जित्नु हुने छ भन्ने बिश्वास राख्दछु ।
नेपालको राजनीति निति नियम अनुसार चल्न नसकेर हो वा अरु नै कारणले हो, भन्न सकिएन । राजनीति निर्दयी हुदोरहेँछ भन्ने ढंगबाट पुराना नेताहरुमा अनुभूति हुन गइरहेको छ ।
उपरवाला पनि नेपाली समाजमा तिनै जालि-झेलिकै दोस्ति बन्दारहेछन । जालि-झेलिकै सेवक बन्दा रहेछन । नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा सुनसरीका नेताहरु मध्य धेरै दुख , हण्डर खादै निरन्तर ईमानदारिता पू्र्बक काम गर्दै आउनु हुने मध्य एक तरहरा आपगाछि निवासी कमरेड ओम कोईराला पनि हुन । मेरो राजनितिक यात्रामा यहि बुझाई छ ।
सुनसरीमा पंचायतको चरम दमन सहन नसकेर २०४०/०४१ सालमा पार्टीको जिम्मेवारी पाउनेहरु लाखा-पाखा लागेका थिए । तिनै ओम कोइराला हुन, बक्लौरी, प्रकाशपुर , एकम्बा जस्ता गाउमा गाउलेहरुसित मिलेर बसेर गाउलेबाट दिईएको खाेले फाडो खादै पंचायत फाल्न कम्यूनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने । यो मेरो बुझाईलाई सुनसरीको कम्यूनिष्ट आन्दोलनको हेक्का राख्नु हुने राजनेताहरुबाट नकारिन्न भने मेरो जिकिर छ ।
पंचायत फालियो । माननिय, मेयर साहब, जिल्ला सभापति जस्ता पदमा पुगेर सरकारी सेवा, सुबिधा लिन राता रात अरु नै क्रान्तिकारी नेताहरु आए । कमरेड ओम कोइरालाको भागमा कालो झोला बोकेर मजदुरहरुको आन्दोलनमा मेची-महाकाली हिड्ने जिम्मेवारी प्राप्त भयो । लुरु लुरु खुरु खुरु हिडिरहनु भयो । म पनि संगै हिडिरहने मध्यको पछिल्लो समयको एक हो ।
मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याईयो । तिन तहको सरकार बनाईयो । कमरेड ओम कोइरालालाई पनि कहि कतै जिम्मेवारी दिनु पर्दछ भन्ने कसैलाई लागेको पाईएन । सुनसरीको कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा यो भण्दा अर्को अनौठो कुरा के हुन्थ्यो होला र ? तै पनि उहाले कहि कतै दु:ख ब्यक्त गर्नु भएन । नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा दुइ अढाई बर्ष अगाडि एक महान अनि एेतिहासिक काम सम्पन्न भयो । ठूला दुई कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले तथा माओवादी केन्द्र एक बनाईयो । बिभिन्न कमिटीहरू बनाईयो । नेताहरुले कार्यकर्तालाई चाल्नामा राख्दै चाल्दै चाल्नाको प्वालबाट बिभिन्न नेतागणको नाममा कार्यकर्ता झार्दै बिभिन्न कमिटीको जिम्मेवारी दिईयो । यहा अर्को अचम्भित कार्य भयो । उहाँका नाति तहका नेताहरु सबै केन्द्रीय कमिटीमा परे । उहाँ कहि अट्नु भएन ।
यो समयमा बिपि कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको मेडिकल युनिट १ मा उनै कमरेड ओम कोईराला बिमारी भइ उपचारको सिलसिलामा हुनुहुन्छ । २०७७ जेष्ठ १ गते उहाँलाई अस्पतालमा भेटेर आए । औजार अनलाईनका प्रधान सम्पादक केदार बस्नेत, औजार दैनिक प्रबन्धक दामोदर गुरागाई तथा मर्निङ टाइम्स प्रबन्धक रोशन दाहाल पनि साथमा जानु भएको थियो ।
कमरेड ओम ! जो सुकै ले जस्तो ब्यबहार गरे पनि नेपाली जनता, नेपाली मजदुरको मन मस्तिष्कका बिचमा असल, इमान्दार नेताको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । तपाईंको जस्तो जनताले सम्झिरहने लगानि, गुण अरूसँग पक्कै छैन । उपरवाला पनि बेईमान गर्दै छन । साहसका साथ अगाडी बढ्नहोस । तपाईंको साहस मलाई थाह छ । पक्कै पनि रोगलाई जितेर छिट्टै जाति हुनुहुने छ । उपरवालाले भन्न कर लाग्ने छकि बेईमान त अरू नै रहेछन् ओम कोईराला होईन रहेछन । गल्ति भए छ भनेर ।